Okuphakela izinja: sikutshela konke | Izinja Umhlaba
Abondli bezinja banemvuthu engaphezulu kakhulu kunokuhlangana neso. Ekupheleni kosuku, kungenye yezinto eziyisisekelo inja yakho ezokusebenzisa okungenani kabili noma kathathu ngosuku, ngakho-ke kubaluleke kakhulu ukukhetha eyodwa evumelana naye futhi uyisebenzise kahle ngokukhululeka.
Kungakho silungiselele le ndatshana nabaphakeli bezinja abahamba phambili ongabathola ku-Amazon., ngaphezu kokukutshela ukuthi ungayikhetha kanjani evumelana nenja yakho noma wena noma ukuthi yiziphi izinto zokusebenza noma izinhlobo ezihamba phambili, phakathi kwezinye izinto eziningi. Ngaphezu kwalokho, sincoma futhi le ndatshana ehlobene nokuthi thola okuphakelayo kwezinja kwasekuqaleni.
Ama-Amazon Basics - Isondli ...
I-Bonve Pet 2x400ML ...
Isondli Sezinja zeDecyam ...
Ukuphakelwa Okuphakelayo ...
Okuphakelayo okuyiphutha kwe ...
Isiphakeli sengobo yomlando, ...
1 Okuphakelayo okuhle kakhulu kwezinja
1.1 I-anti-fog feeder ene-labyrinth
1.2 Iqoqo leziphakeli ezimbili ze-aluminium
1.3 Okuphakelayo nge-labyrinth
1.4 Isondli esinomata
1.5 Okuphakelayo okuzenzakalelayo kwamakati nezinja
1.6 Isitsha sobumba sezinja
1.7 Okuphakelayo okungasheleli
2 Izinhlobo zezitsha zezinja
3 Impikiswano ephakanyisiwe yokuphakela
4 Ungayikhetha kanjani isitsha
5 Ungathenga kuphi abaphakeli bezinja
Okuphakelayo okuhle kakhulu kwezinja
I-anti-fog feeder ene-labyrinth
Isondli Sokuzijabulisa Sangaphandle ...
Uma inja yakho ikhathazeka kakhulu ngokudla, unentshisekelo isitsha sokuqeda ukugcwalisa esivimbela noma iyiphi ingozi yokuhlushwa esiswini (sizokhuluma ngayo kamuva). Le modeli yenziwe ngepulasitiki futhi, ngaphezu kwemibala eminingana, iyathakazelisa kakhulu ngoba ayikuvumeli kuphela ukuthi ukhethe umthamo, kepha futhi namamodeli we-maze ahlukile.
Ngalesi sakhiwo esilula, okuphakelayo kuqinisekisa ukuthi isilwane asidli ngokulangazelela okungaka (Kuzothatha isikhathi esifinyelela kwayishumi ukudla ukudla). Imibono iyavuma ukuthi kubonakala isebenza, ikakhulukazi ngezinja ezinkulu ezizalanayo, yize abanye bekhala ngokuthi kunzima ukuhlanza ngesandla.
Iqoqo leziphakeli ezimbili ze-aluminium
Ukunikezwa kwe-Amazon Basics le seti elithandekayo lezitsha ezimbili ze-aluminium. Hhayi kuphela ukuthi anamandla ngokumangazayo, ngakho-ke alungele izinja ezihamba phambili kakhulu, kepha afaka nesisekelo senjoloba ukuze singahanjiswa kalula. Futhi, ungayifaka kumshini wokuwasha izitsha futhi ngeke igqwale. Okuwukuphela kokubi ukuthi awukwazi ukukhetha umthamo, ngakunye kungaqukatha cishe amagremu angama-900 okudla.
Lokhu okunye okuphakelayo nge umklamo we-maze uzovumela inja yakho ukuthi idle ngokushesha okuncane sibonga ukwakheka kwawo, lapho ngaphakathi kunochungechunge lwamaphaseji ahlukaniswe ukuphakama kwepulasitiki. Le nayo inemibala emihle nemiklamo ehlukile (lapho inja yakho ifunda ngomklamo ngenhliziyo, ngokuqinisekile kuzofanele uyihlanganise nenye), ngokungeziwe, encike ngosayizi wenja.
Umenzi weluleka ukuthi kubaluleke kakhulu ukuthi, uma inja iyilimaza, uyibuyisele ngokusheshanjengoba ungahle ube sengcupheni yokuphelelwa umoya.
Lesi siphakeli sithakazelisa kakhulu, futhi siyindlela enhle kakhulu ongayibheka uma ufuna ukuba nefulethi elihlanzekileNjengoba ifaka umata, ukhetha isitsha sensimbi, ngoba siyinto okwenziwe ngayo, futhi uma ufuna ukuthi ibe namandla okunciphisa inja yakho lapho idla, ngoba inomklamo wokulwa nokukhunta. Ngaphezu kwalokho, ungakhetha umthamo, otholakala ngosayizi ababili, M no-L.
Okuphakelayo okuzenzakalelayo kwamakati nezinja
Kuyinto inketho ebiza kakhulu Phakathi kwabo bonke esizokhuluma ngabo namuhla, kepha kunconywa kakhulu kulabo abachitha isikhathi esincane ekhaya noma abafuna ukulawula isisindo sokudla kwabo, ngokwesibonelo. Lesi sikhwama singasetshenziswa kuzo zombili izinja namakati, singahlelela insizakalo eyodwa kuya kwezine ngosuku futhi sineminye imisebenzi epholile kakhulu, ngokwesibonelo, ungarekhoda izwi lakho ukubiza isilwane sakho ukuthi sidle. Inomthamo wamalitha ayisikhombisa.
Isitsha sobumba sezinja
TRIXIE Bowl bobumba ...
Asifuni ukukhohlwa izitsha ze-ceramic ezibhekiswe ezinjeni, okunconywa kakhulu ngalo modeli ovela kumkhiqizo waseJalimane iTrixie. Zilungele kakhulu izinja ezingezwani nokwelashwa futhi ziphathwa ngengubo ecwebezelayo ephephe ngokuphelele eyenza ukuthi kube lula kakhulu ukuyihlanza. Le modeli inamakhono amathathu ahlukene (0,3, 0,8 no 1,4 litres) nemiklamo nemibala eminingana ongakhetha kuyo.
Futhi siqeda ngokuphakelayo okuphindwe kabili okunomata, okuphelele ukuze isilwane sethu singasishiyi umhlabathi owenziwe izimpungushe. Izitsha zenziwe ngensimbi engagqwali, zingena kukhaphethi futhi kulula kakhulu ukuzihlanza. Ungabeka ukudla okomile, okumanzi, amanzi, ubisi ... Isiphakeli ngasinye sinamandla angama-200 ml.
Izinhlobo zezitsha zezinja
Kunezinhlobo eziningi, eziningi ezahlukahlukene zabaphakeli bezinja, futhi ngayinye ingaqondiswa ohlotsheni oluhlukile lwenja. Ngokulandelayo ngeke sikhulume nawe ngezinhlobo ezahlukahlukene kuphela, kepha nokuthi zisebenza kanjani, noma cha, kuye ngohlobo lwenja ehloselwe zona.
Izitsha zePlastiki ngokungangabazeki yizitsha zezinja ezithandwa kakhulu, mhlawumbe ngenxa yentengo yazo (enganqobeki) nokuqina kwayo. Kodwa-ke, kunezinkinga ezithile, ngoba izinja ezithanda ukuluma nokuklwebha zingalimaza isitsha. Amagciwane angakhula emanxebeni, ekugcineni enze isitsha sihlanzeke futhi singaphephi isilwane sakho.
Ngaphezu kwalokho, ukukhanya kakhulu, Izitsha zepulasitiki nazo ziyinkinga ezinjeni ezihanjiswe kakhulu, njengoba bengangqongqoza futhi bawe ukudla.
Izitsha ze-Ceramic, ngokunembile, ziyindlela enhle yezinja ezihanjiswe kakhulu (Noma ungadluli olwandle, ngoba uma inja yakho iyisivunguvungu ingayiphula) ngoba inesisindo esiningi futhi kubiza kancane ukuyihambisa. Zithenge nge-ceramic ephathwe ngendwangu yokuvikela, ngoba ngaleyo ndlela iyizinto ezinomhlwenga kakhulu lapho amakoloni amabhaktheriya angahlala khona. Ngakho-ke, uma isitsha siphuka, kufanele usilahle ngokushesha.
Esinye isici esithakazelisayo se-ceramic ukuthi akubangeli ukusabela ezinjeni. abahlushwa yiluphi uhlobo lokungezwani komzimba nezinye izinto.
Iziphakeli zensimbi ziyasebenza kakhulu futhi ziyindlela eyintandokazi kubantu abaningi, ngoba amelana ngokumangalisayo, okwenza kube kuhle ezinja ezishukumisayo kakhulu, ezisindayo, futhi, ngaphezu kwalokho, iningi lazo lifaka izinyawo zenjoloba ukuze zingakwazi ukuhamba kalula. Ngaphezu kwalokho, ngenxa yento enziwe ngayo, kulula kakhulu ukuyihlanza nokubulala amagciwane.
Nokho, zinomsindo impela lapho izinja zidla noma sibeka ukudla kuzo, ngakho-ke uma ungathandi imisindo ephezulu lokhu kungenzeka kungabi inketho engcono kakhulu.
Uma inja yakho iminzile kakhulu futhi ine imvamisa kuba nezinhlungu zesisu ngenxa yokudla ngokushesha okukhulu, isitsha esingaqinile singaba yisixazululo. Lezi zitsha azijwayezi inja ukuthi idle kancane kuphela, kepha futhi ziyenza icabange, ngoba ziqukethe uhlobo lwe-labyrinth lapho inja kuzodingeka ithole ukudla kwayo.
Abahlinzeki bokudla okuzenzakalelayo bezinja ngokungangabazeki bahle kakhulu kulabo abanesikhathi esincane sokuchitha nezinja zabo, ngoba inesibopho sokugcwalisa isitsha ngokudla ngokuzenzakalela. Uzodinga kuphela ukukugcwalisa ngokudla okusha ngezikhathi ezithile. Iningi likuvumela ukuthi ukhethe ukuthi lizosebenza kangaki futhi kangaki ngosuku.
Impikiswano ephakanyisiwe yokuphakela
Impela, Phakathi kwezinhlobo zama-feeder esisanda kukhuluma ngawo, uphuthelwa enye: ama-feeder akhulisiwe. Isizathu sokuthi singazifaki silula, ziyingozi kulezo zinja ezingahlushwa isisu.
I-gastric torsion yisifo esibucayi okufanele silashwe ngokushesha okukhulu. Kubangwa yinja uqobo lwayo lapho idla ngokulangazelela okukhulu, okufaka ukudla okuningi negesi, okwenza ukungena nokuphuma kwesisu kuvalwe, okuholela ekuqunjelweni nasekushaqeni, okungaholela ekufeni.
Yize ekuqaleni izitsha eziphakanyisiwe zanconyelwa lezo zinja ezithanda lesi sifo ngoba kuthiwa bafaka umoya omncane lapho bedla, ucwaningo lwakamuva lukhombisile ukuthi empeleni, kuphambene, nokuthi ukusetshenziswa kwalolu hlobo lwe-feeder kungadala ukuqunjelwa esiswini (akumele sikhohlwe ukuthi izilwane "zenzelwe" ukudla nazo amakhanda abo phansi).
Ungayikhetha kanjani isitsha
Manje njengoba sesibonile izinhlobo ezahlukahlukene zesitsha, sizogxila kulokho esingakhetha ukuhambisana nezidingo zenja yethu nokuthi udla kahle ngokukhululeka.
Ngeke sisanweba, ngamafuphi, khetha isitsha sepulasitiki uma ufuna okuthile okushibhile, i-ceramic yezinja ezinokungezwani komzimba noma insimbi uma ufuna okuthile okungahambisani nakho. Ama-automatic dispensers ayasiza uma ungafuni ukuqaphela ukondla inja yakho noma ungekho ekhaya kakhulu. Qaphela izitsha eziphakanyisiwe, ezingadala ukuhlukunyezwa esiswini.
Sesishilo, izinja (nezinye izilwane) sezijwayele futhi zenzelwe ngokwemvelo ukuthi zidle ngamakhanda emhlabathini. Kodwa-ke, kunesimo lapho ungakhetha khona isitsha esiphakanyisiwe uma inja yakho inezinkinga zentamo, isinqe noma umqolo. Kodwa-ke, kuphoqelekile ukuthi ukhulume nodokotela wezilwane wakho kuqala.
Ekugcineni, umthamo nakho kuyinto okufanele uyinakekele. Ngokusobala, uma inja yakho incane nge-feeder encane izosebenza, ngenkathi uma inkulu uzodinga okuthile okunamandla amaningi. Ziqondise enanini lokudla odinga ukukunika isikhathi ngasinye ukuthola umthamo.
Ungathenga kuphi abaphakeli bezinja
Ngempela ungathola abaphakeli bezinja cishe yonke indawoNoma ngabe udinga okuthile okucacile, hhayi noma yiliphi isayithi elizokusebenzela. Ngokwesibonelo:
Amazon Yilapho uzothola izinhlobonhlobo ezinkulu kakhulu zabaphakeli bezinja, futhi, kukhona zonke izinhlobo futhi eziguqulelwe izidingo zakho nobabili nenja yakho.
Ngenkathi ku- ezitolo ze-intanethi yezilwane ezinjengeTiendaIzilwane noma i-Kiwoko ngeke uthole ukuhlukahluka okuningi. Kodwa-ke, banezinketho ezithakazelisa kakhulu, ikakhulukazi kuwebhu, noma ngabe inja yakho inezidingo ezikhethekile kungcono ukubheka isitolo esingokoqobo.
Ekugcineni, zonke izindawo ezinkulu ezinesigaba sezilwane ezifuywayo (njengeCarrefour, uLoyoy Merlin ...) uzoba nezitsha zezinja. Kodwa-ke, abahlukaniswanga ngokuba namamodeli amaningi, yize bengakukhipha enkingeni.
Abaphakela izinja banezimvuthu eziningi kunalokho okubonakala, ngoba uma sifuna ukondla inja yethu kahle kufanele sinake lokho ekudingayo. Sitshele, yiphi i-feeders esebenzisa inja yakho? Ngabe kukhona osikisela ngokukhethekile? Ngabe ucabanga ukuthi sishiye okuthile okumele sikunake?
Indlela ephelele ye-athikili: Inja yomhlaba » Izinja ezijwayelekile » Izesekeli zezinja » Abaphakela izinja: sikutshela konke